Ukraine: Qalalaasaha oo gaaray koofurta - BBC News Somali
Wasiirka arimaha gudaha ee dalka Ukraine, Arsen Avakov, ayaa sheegay inay iska caabiyeen 300 oo oo hubeyso oo isku deyay inay xoog ku galaan xarunta Ilaalada magaalo xeebeedka Mariupol ee koofurta dalkaasi.
Mr Avakov ayaa sheegay in la dilay sadax ka mid ah dadka weerarka qaaday oo loo maleynayo inay yihiin taageerayaasha Ruush-ka.
Isku dhacan waxaa sidoo kale ku dhaawacmay ugu yaraan 13 qof. in kabadan 60 qof ayaa la xiray, sida uu sheegay wasiirka.
Wada hadalo heer sare ah oo looga xaajoonayo qalalaasaha Ukraine ayaa kasocdo magaalada Geneva.
Madaxweynaha Mareykan-ka Mr Obama ayaa markale ku caga jugleeyay in Ruush-ka ay saameyn xun ku yeelan doonto haddii ay taageero kale siiso kooxaha gooni u goosadka doonayo ee dalka Ukraine.
Balse, madaxweynaha dalka Ruush-ka Mr Putin ayaa beeniyay eedo loo jeediyay oo ahaa in Ruush-ka uu ka dambeeyo qalalaasaha ka taagan Bariga dalka Ukraine.
Hadalka ayuu ka sheegay hadal qadka telefoon ka ah oo uu ka jeediyay TV-ga dalka Ruush-ka.
Mr Putin ayaa ka jawaabayay su’aalo ay weydiinayeen muwaadiniinta Ruush-ka, waxaana kamid ahaa dadka su’aalaha weydiiyay kuwo kusugan gobolka Ruush-ka uu qaatay bishii hore ee Crimea.
Mr Putin ayaa la weydiiyay jawaabta uu ka bixinayo eedaha ku saabsan in ciidamada gaarka ah ee Ruush-ka inay kamid yihiin dadka qabsaday dhismayaasha dowladda Ukraine ee magaalooyiinka bariga dalkaasi.
"Waxaas oo dhan waa macno la’aan. Majirto ciidan naga joogu bariga Ukraine, majirto calaamado muujinayo arintaasi. Dhammaan dadkaasi waa deegaanka. Cadeynta ugu wanaagsan arinta waxay tahay dadka inay iskooda wejiyada u duubteen. Waan u sheegay reer galbeedka inaysan jirin dadkaasi meel ay aadaan, kama tagayaan halka ay joogaan, waa muwaadiniinta dhulkaasi, waadna la hadli kartaan." Ayuu yiri Putin oo ka hadlayay TV-ga dowladda Ruush-ka.